25 nde nkeji nke Galaxy S7 rere na njedebe nke June | Gam akporosis
Samsung enwewo ike iju oge a site na iweta ama na meziwanye adịghị ike nke Galaxy S6 nke batrị kachasị mma, enweghi oghere maka microSD na ihe mgbochi mmiri na ájá na-efu. Ihe a niile bịara na Galaxy S7 nke anyị maara ugbu a atụmatụ ọnụahịa ya maka njedebe nke ọnwa June.
Ọ bụrụ na Samsung rere ihe dị ka nde 10 nke Galaxy S7 ruo izu ndị ọnụahịa ahụ na-ere, ugbu a, site na isi mmalite abụọ dị na South Korea, ha na-ekwusi ike na ngwakọta ahịa nke abụọ S7 nwere ike iru 25 nde nkeji na njedebe nke ọnwa a nke June.
Ihe atọ maka ihe ịga nke ọma a nke ndị ọkachamara dị iche iche na South Korea nyere bụ: ịmalite n'oge, ezigbo mma na ahịa ike. M ga-enwe nkwenye nke obodo gam akporo nke enyerela aka ịzụta ekwentị a dị elu nke nwere nnukwu atụmatụ na nke ahụ bụ ọ naghị aga n'ebe ọ bụla, ihe dị oke egwu maka ekwentị gam akporo na ogo a. Ọ bụ ama na-eji na na batrị anaghị ata ahụhụ maka ya, na-eru batrị ụbọchị n'ụzọ zuru oke, ọ bụrụ na anyị agụworị igwefoto ya magburu onwe ya, UI na-adịchaghị ala na ụfọdụ nkọwa dịka iko na azụ, ha karịrị ezu ihe iji gbaa ahia gị ume.
Ọzọ Korean post pụta ìhè na Galaxy S7 ihu bụ ịkasị Galaxy S7Yabụ, dị ka nsụgharị a dị oke ọnụ karịa ụdị ọkọlọtọ, Samsung na-atụ anya ịhụ oke oke uru mgbe nkeji nke abụọ kwụsịrị na June 30.
Site na mgbe ahịa malitere ịda n'etiti afọ, Samsung ga-enwerịrị Depụta ihe ngosi nke Galaxy Note 7 dịka anyị siri mara n'oge gara aga.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Samsung Galaxy S7 ga - eru nkeji 25 nde ere na ngwụcha ọnwa
Ọ bụ ezigbo ọnụ ahịa, ihe nwute maka ọrụ teknụzụ samung, nke opekata mpe na Spain na-egbu mgbu. Ihe karịrị 1 ọnwa na ọkara ịgbanwe ihuenyo n'ihi na breakage na m ka na-amaghị mgbe ọ ga-abata (ịda site na tebụl na ọnụ na-ebibi n'ihu na n'azụ.) gorilla glass na aluminium Ha na-ahapụrụ obere ihe ha chọrọ.Ọ dịkwa njọ maka Samsung, na ọ bụrụ na ị gbanye mgbanaka ha, ha agaghịzi enye gị nkwa ọbụlagodi na ọ bụ nsogbu ụlọ ọrụ.
Ihuenyo bụ nsogbu nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ata ahụhụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe na-atọ ụtọ ịre ya ma jide onye ọzọ .. Ọ dị m nwute. Daalụ!